Seensa Sagantaa Jawar Manchester, UK Kichuu
HomeAfaan OromooTVSeensa Sagantaa Jawar Manchester, UK
Mari Haala Yeroo Irratti Professor Mohammed Hassan fi Professor Asaffaa Jaalataa waliin
Marii Jawar Hawaasa Oromoo UK waliin taasisaa jiru
Arraba bofaa baatta….
Sammuun kankne moofaadha
Sammuun #Ginbot Sabaattii,
#Biraanuu Nagaaa Baatta.!
Akka Eebicha gannaa
Akka ceekaa hadhaa’a.!
Boolla geessa karaanke….
Daandii Minilik geessu
Hailu Lelissa Oboro irraa
Gantoota ergama diigumisa mooraa qabsoo Oromoo fudhatanii EZEMA waliin akka dalagan Abiyyi Ahimediin ramadaman:
2. Amiin Jundii
3. Berhaanuu Magarsaa Leenjisoo
4. Hundee Dhugaasaa
Jarri kun maqaa gorsaa jedhuun USD 5,000- 6,000 UNDP irraa warra kanfalamuufiidha.
Yoo galma hojii ramadii keessan geessaan aangoo Ministeera argatu jedhanii jiru.